January 23, 2021 – မြန်မာသတင်းစုံ
ပထွေးရော ကျွန်မရော အပြတ်ဖီလင်တွေ တက်ပြီး ရက်ရက် ရောရော လိုးနေ ခံနေကြတဲ့ အချိန်ကောင်း အခါကောင်းမှာပဲ ။ “ဝုန် ..” ဆို အဝတ်ဗီဒိုတံခါး ပွင့်လာပြီး စိုင်းတစ်ယောက် ခုန်ပေါက် ထွက်လာတော့ တာပါပဲ ။ ဒီကောင်က ဘယ်တုန်းကများ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် မသိပါဘူး ။ ဒါမှ မဟုတ် အစကတည်းက အဝတ်တွေချွတ်ပြီး ဗီဒိုထဲဝင်ပုန်းနေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ် ။ ဘာအဝတ် အစားမှမရှိတော့ဘူး ။ တစ်ကိုယ်လုံး ပြောင်ရှင်းလို့ ၊ အဲတော့ သူ့လီးကလည်း တောင်လို့ မတ်လို့ပါလား …။ ကျွန်မဟာ ပထွေးလိုးတာကို ဖင်ပူးတောင်းထောင်ပြီး ခံရတာ အရသာတွေ့လွန်းတာကြောင့် ၊ စိုင်း ချောင်းကြည့် နေတယ်ဆိုတာကိုတောင် မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်နေတယ် […]
Posted on January 23, 2021 Author admin	Comments Off on အမှောင်တကာ့အမှောင်
နွယ်ဦး ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပြီ ။ ဇာခြည် အကြံပေး လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်း လုပ်ဖို့ ။ မနေ့က တိုင်းရုံးမှာ သင်တန်း တခုထဲ ဆင်းခဲ့ကြတဲ့ မွန်းမွန်းစံကို မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုးတယ် ။ ကိုယ့်ထက် အဆင့်မြင့်နေတယ် ။ မျက်နှာမပျက်သွားအောင် ထိန်းထားလိုက်ရတယ် ။ ရင်ထဲမှာတော့ မကောင်းဘူး ။ တာဝန်ကျေပွန်အောင် ကြိုးစားလုပ်ခဲ့တာပါဘဲ ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်တာ အထက်က မသိဘူး . .မမြင်ဘူး ။ တိုးသင့်တဲ့ ရာထူးက မတိုးဘူး ။ ဘာပြစ်ချက်မှလည်း မရှိဘူး ။ ဘာအဂတိမှလည်း မလိုက်စားခဲ့ဘူး ။ တခုခုတော့ မှားယွင်းနေတယ် ။ တိုးတဲ့လူတွေက တိုးတယ်လေ ။ နွယ်ဦးက သိပ်ရိုးလွန်း […]
Posted on January 23, 2021 Author admin	Comments Off on ရက်ရက်ရောရော
နှင်း ချည်နှောင်ခံရတာနဲ့ ချည်နှောင်ရတာ ဘာကိုကြိုက်လဲဟင် နှင်းကတော့ ကိုယ့်ကိုအချည်မခံနိုင်သလို ကိုယ်တိုင်လဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မချည်ချင်ဘူး သူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ သူပဲလေ ဒါမဲ့ တခါတလေမှာ ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပဲ ကိုယ့်အပြုအမူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ချည်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် တကယ့်ကိုအရုန်းရခက်တယ်မလား အခုလဲ မထင်မှတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်ချည်မိတဲ့အကြောင်းလေးကို အထန်ကိုကို အထန်မမတို့အတွက် ဖော်ပြလိုက်တယ်နော်……။ ဖေ့ဘုတ်ဆိုတာ သုံးတတ်ရင် ဆေး . မသုံးတတ်ရင် ဘေး..ပဲလို့ လူတော်တော်များများ လက်ခံထားကြတယ်မလား ကျမ ငြိမ်းအိလွင်ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီအဆိုကို ချွင်းချက်မရှိ လက်ခံထားသူတစ်ယောက်ပါ ဖေ့ဘုတ်သုံးတာ ကြာနေပေမယ့် ပုံများများမတင်ဖြစ် ဗဟုသုတရစေမယ့် ပို့စ်လေးတွေသာ လိုက်ရှယ်ရင်း ရိုးရိုးလေးပဲ အသုံးပြုသူပါ အပ်သမျှ ဖရန့် တေကိုလဲ သေချာစီစစ်ပီးမှလက်ခံတတ်တာ အကျင့်။
Posted on January 23, 2021 Author admin	Comments Off on အားမရဘူးရှင့်သိရဲ့လား
အေး…ဟုတ်တယ်…..ငါလဲကြားဖူးတယ်…..စောက်ခေါင်းနက်တဲ့ မိန်းမကို ခေါင်းအုံး ခုပြီး လုပ်မှအားရဆိုဘဲ….ခါးအောက် ခေါင်းအုံးခုလိုက်တော့ သားအိမ်ဝက မြင့်တက်လာပြီး လီးထိပ်နဲ့ဆောင့်မိတော့ ပိုကောင်းဆိုဘဲကွ…. တူးတူးက သူကြားဖူးသမျှကို အားပါးတရပြောနေစဉ် အောင်ထွန်းက… “….ခေါင်းအုံးခုလိုးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ……မိန်းမတစ်ယောက် စောက်ခေါင်းနက် မနက် ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ…..သူ့ထမီလှန်ပြီး လက်နဲ့ထိုးကြည့်ရမှာလား…” “…..နင့်..အမေကလွားမှဘဲ….လက်နဲ့ထိုးကြည့်လို့ရမလားဟ….ပါးကျိုး ထောင်ကျသွားမှာပေါ့……ခွီးစ် တဲ့မှာဘဲ….တုံးလိုက်တာ….” တူးတူးကအောင်ထွန်းကိုကလော်တုတ်လိုက်သည်။“…..ဒါဖြင့်ရင်….စောက်ခေါင်းနက် မနက်သိဘို့ ပြောလေကွာ…” အောင်ထွန်းက သူ့အမေကို ထိပါးပြီးပြောလာသော တူးတူးကို မကျေမနပ်သံဖြင့် မေးလိုက်၏။ “…..ပြောလိမ့်မပေါ့ကွာ…မင်းကိုက လောနေတဲ့ဥစ္စာ “ ။
Posted on January 23, 2021 Author admin	Comments Off on ဆွေမေ့မျိုးမေ့ပါပဲရှင်
သူများစာအုပ်တွေတင်နေတာများပြီ ကိုယ့်အကြောင်းလေးပဲ ကိုယ်ပြောမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်ကပေါ့.။ဖြစ်တာ ပြောပါတယ်။ ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်ဝမ်းကွဲပေါ့။ အသက်က သိပ်မကွာဘူး။ သူက အဲ့တုန်းက ၁၀တန်း။ ကျနော်က တက္ကသိုလ်တက်နေတာပေါ့။ သူ့အဖေက မလေးမှာအလုပ်လုပ်နေတာ။ အမေနဲ့ ၂ယောက်ထဲနေရတာပေါ့။ ကျနော်က ကျနော့်ညီမကိုအမြဲ စာပြပေးနေကျ။ သူ ၃ တန်းလောက်ထဲကစပြီး ၁၀တန်းထိ ကျနော်ပဲ ကျူရှင်ဆရာဖြစ်ခဲ့တာ။ ၁၀တန်းကျတော့ သူကျူရွှုင်တွေဘာတွေတက်ခွင့်ရတယ်။ကျတော်က ဂိုက်ပေါ့။ မှတ်မှတ်ရရ အဲ့နေ့က သီတင်းကျွတ်။ ကျောင်းဆယ်ရက်ပိတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျူရှင်က စာမေးပွဲဖြေရမယ်ဆိုတော့ သူ့ကို ညလုံးပေါက် သင်ရတာပေါ့။ ကျတော်လည်း အဒေါ့်အိမ်သွားအိပ်ရတာပေါ့။ သီတင်းကျွတ်ကာလဆိုတာ ၁၀တန်းကျောင်းသားတိုင်းအတွက် ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်ပဲလေ။
Posted on January 23, 2021 Author admin	Comments Off on ကြိုက်သလိုလုပ်ပါတော့ရှင်
Posted on January 23, 2021 Author admin	Comments Off on ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ်
မင်းမင်း ဒီနေ့ စိတ်ညစ်နေတယ်။ ဒီကုမ္မဏီကို ရောက်တာ တနှစ်ခွဲကျော်ပြီ အထက်အရာရှိနဲ့ လုံးဝမတည့်။ စလုံး အဖိုးကြီးက ရှေးရိုးဆန်တယ်။ လက်အောက်က အာအီး တွေရော အာတိအို တွေရော သူရစ်တဲ့ ဒဏ်မခံနိုင်ကြ။ ခဏခဏ ဂဂျီဂဂျောင်ကျတော့ လက်အောက်ဝန်ထမ်းမမြဲ။ ဒီနေ့လဲ မင်းမင်း ချစ်သူနဲ့ ညဖက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ချိန်းထားတာ ဘယ်လိုမှ ထွက်မရ။ အိုဗာတိုင် ဆင်းရအုံးမည်။ ဒီ အလုပ် ရောက်ပြီးကတည်းက ချစ်သူနဲ့က တဂျက်ဂျက်။ ခုလဲ စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ နင်နဲ့ငါ ပြတ်ပြီတဲ့။ ပြတ်လဲ အေးတာပဲ သိပ်တော့ ခံစားမနေပါဘူး။ တွဲကတည်းကလဲ ကျောင်းသူ ချာတိတ်ဆိုတော့ ဂဂျီဂဂျောင် အရမ်းကျတဲ့ ချာတိတ်။ “မင်း သွားချင်သွားလေ။ ငါ နင့် တာဝန်ယူထားပေးမယ်” အထက်က အာအီး […]
Posted on January 23, 2021 Author admin	Comments Off on အပြုအစုကရှယ်ပဲ
ည ၁၁ နာရီကျော်နေပြီ….. အိပ်ယာထဲမှာ ဘယ်ညာ လူးလိမ့်ရင်း အိပ်လို့မရနိုင် ဖြစ်နေသည်….. လက်တဖက်မှ ယောင်ယမ်းကာ ရင်နှစ်မွာကို ပွတ်သပ်နေမိသည်… သက်ပြင်းမောများချကာ ကြိတ်မှိတ်၍ ခံစားနေရသည်….လျော့တိလျော့ရဲ ထမီအောက်မှ ဖားပေါင်စင်းတစ်ကောင် လွုပ်စိလွုပ်စိနဲ့ ပေါင်နဲ့ ပွတ်မိနေပြန်သည်…. ငိုချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာမိသည်… ဒီခံစားချက်ရဲ့ အထွဋ်ထိပ်ကို သူမခံစားဖူးသည်.. ယ္ခုတစ်ယောက်ထဲ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ ဆိုတာ ရာနွုန်းပြည့်မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာသိ၍ ခံစားနေရ၏.။သူ့နာမည်က မသန္တာချိုနွယ်……. သူမရဲ့ချစ်လှစွာသောအမျိုးသားမှာ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှ လက်ထပ်ပြီး တစ်ပတ်ကျော်မှာပဲ အမှတ်တမဲ့ ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်…။
Posted on January 23, 2021 Author admin	Comments Off on ဆာလောင်နေတာကြာပြီ
Posted on January 23, 2021 Author admin	Comments Off on ဒိလိုကကြုံခဲတယ်
စာကိုသေချာမလုပ်ဘူး စာကိုစိတ်မဝင်စားဘူး မနေ့ကတည်းက သေချာသင်ပေးတာ အာရုံကဘယ်ကိုရောက်နေတာလည်း ပြောစမ်း ဆိုပြီး ခေါင်းကိုဒေါက်ခနဲ ခေါက်ခံထိရင်း အောင်မြင့်မြတ် တစ်ယောက်ခေါင်းလေးပွတ်ရင်း အားးး သေပါပြီဗျာ နာလိုက်တာ ဝသန် ကလည်း မတရားပဲ ခေါက်ပစ်တာ သူ့အသားမဟုတ်တိုင်း မညှာဘူး ဘာ ဝသန် ငါ နင့်ထက် အသက် ၁၃နှစ်လောက်ကြီးတယ် နားလည်လား ပြီးတော့ ငါ့ အလယ်တန်းပြကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်ဆိုတာ သိထားအုံး အောင်မြင့်မြတ် နင့် က အခုမှ 9တန်းကျောင်းသားနော် ရိုရိုသေသေဆက်ဆံ မကြိုက်ဘူး ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အကူအညီတောင်းလို့ နင့်ကို စာလာသင်ပေးတာ သဘောပေါက်နော် ငါကျူ ရှင်သင်တဲ့ ဆရာမ မဟုတ်ဘူး သဘောပေါက်ထား ကြားလား ပိုက်ဆံရဖို့ ငါကျူ ရှင် မသင်ဘူး မေမေကသင်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ငါစာလာသင်နေတာနော် နားလည်ထား […]
Posted on January 23, 2021 Author admin	Comments Off on အစရှိနောက်နောင်